Rabekijana Félix”Omeo vahana sy hasina ny fokontany” | NewsMada
Rabekijana Félix”Omeo vahana sy hasina ny fokontany”
Lasa resabe ny amin’ny fandriampahalemana ifotony; eny, na ny fampandrosoana aza. Mila omena vahana sy hasina ny fokontany, raha ny fijerin’ny filoha nasionalin’ny KMF/Cnoe, Rabekijana Félix.
“Raha ny endriky ny fokontany amin’izao fotoana izao, saika mandefa ny fitantanan-draharaham-panjakana fotsiny. Fa raha tena hitady fampandrosoana eo amin’ny fokontany isika ary tena handray andraikitra tanteraka ny olom-pirenena eo anivon’ny fokontany, omena hasina avy hatrany ny fokontany.”
Fanehoan-kevitry ny filoha nasionalin’ny KMF/Cnoe, Rabekijana Félix, io, momba ny anjara toeran’ny fokontany eo amin’ny sehatry ny fampandrosoana. Ny filoham-pokontany no akaiky ny vahoaka indrindra. Na amin’ny fanadiovana tanàna izany, na amin’ny fiarovana valan’aretina samihafa, na amin’ny fandriampahalemana…Tsy misy vola holaniana amin’ny fametrahana ny rafitra sy ny fifidianana amin’ny fokontany.
Azo atao ny manafoana ny faritany
“Azo atao ny hoe: foanana ny faritany izay efa voafehy ao anatin’ny faritra amin’izao, fa omena vahana ny fokontany”, hoy izy. Eo amin’ny vondrombahoaka itsinjaram-pahefana: miala amin’ny fokontany, tazonina ny kaominina, ary ny faritra. Izay no mahatsara ny fiarahamonina malagasy, ary tokony hapetraka ao anatin’ny lalàmpanorenana izay fanomezan-kasina ny fokontany izay.
Ny filoham-pokontany no mahalala ny kizo sy ny antsipiriany rehetra eo anivon’ny fokontany, hahazoany miaro ny faritra misy azy. Rehefa manana ny hasina tandrify azy ny fokonolona: sarotra, ohatra, ny hidiran’ny mpangalatra ao, ary mandray andraikitra amin’izany avy hatrany ny mponina.
Tsy mety ny fokontany amin’izao fotoana izao hoe mody isafidianana ny olona dimy, nefa izay tian’ny lehiben’ny distrika hotendrena no lehiben’ny fokontany. Lasa manana trosa moraly amin’ny fanjakana nanendry azy ny lehibem-pokontany, fa mandray baiko amin’ny lehiben’ny distrika. Mety hampivily ny safidim-bahoaka izay.
Mila hahitsy ny lalàmpanorenana
Mila fanitsiana izany ny lalàmpanorenana. Raha ny marina, aleo izay tena hevi-bahoaka no avoaka amin’ny fanatsarana ny lalàmpanorenana. Mifandrindra amin’ny fiainam-piarahamonina malagasy izany, fa tsy ahodinkodina araka izay safidin’ny mpitondra. Mody atao ny fakan-kevitra sy ny fihaonambe. Nefa ny baikon’ny mpitondra ihany no arahina ametrahana ny lalàmpanorenana. “Aleo mba tena lalàmpanorenana marim-pototra, tsy miovaova, lovain-jafiafy. Izay no hanasoavana sy hampandrosoana ny firenena”, hoy ihany izy.